Ubuzwe be-Antigua neBarbuda yi-Antigua Hermitage Bay Abelana
THOLA UKUTHOLA KONKE OKUQUKILE, OKWEZINKANYEZI EZINKANYEZEKHULU
Indawo yokubhuka kanokusho ebekwe emthambekeni wentaba enesihlabathi efihliwe, lapho iphunga le-frangipani ligcwalisa umoya, umsindo wamagagasi agingqika ngasogwini uzungezile, kanye nesipiliyoni esenzelwe ukuvuselela, ukubusa nokuthula komphefumulo okulindele. Uyemukelwa eHermitage Bay.
Itholakala ekhoneni elithulile le-Antigua futhi inikela ngendawo yokuhlala kanokusho, impilo nokudla, indawo yethu yokubhuka eyakhiwe ngokucophelela igubha ukuthula, imfudumalo nobuhle bemvelo obungavamile baseCaribbean.
Uma kukhulunywa ngokudla, sonke senza izikhathi ezihlala nawe kuze kube phakade. Futhi ngezithako zethu eziningi ezitshalwe engadini yethu yemifino ephilayo, uqinisekisiwe ukunambitheka kwangempela kweCaribbean.